Latest – Onlinenungak
Posts published in “Latest”
By chin tawi on February 8, 2021
တပ်မတော် အာဏာသိမ်းမှုဟာ ဥပဒေနဲ့ မညီညွတ်ဘူးလို့ ICJ သဘောထား ထုတ်ပြန် ———————————————————— တပ်မတော်ရဲ့ အာဏာသိမ်းမှုဟာ ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေနဲ့ မညီညွတ်သလို အခြေခံ ဥပဒေ နည်းလမ်း အားလုံးနဲ့လည်း ကိုက်ညီမှု မရှိကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး (ICJ)က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁…
By chin tawi on January 22, 2021
Zerkhat Chung ah Covid Vaccine Cu Chunh A Si Cang lai. ————————————————————– Nizaan Rak langhter cang bantuk khan Tuni 22 January 2021 ah India nih…
ကယားမှာလည်း တိုင်းရင်းသားအရေးဆွေးနွေးဖို့ တွေ့ဆုံပွဲပျက်ပြန်ပြီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ အစီအစဉ် နှစ်ဖက်နေရာ ညှိနှိုင်းလို့ အဆင်မပြေတာကြောင့် ပျက်သွားခဲ့ပါတယ်။ မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ အောင်မိုးညို၊ ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအင်ထုံခါးနော်ဆန်တို့ပါဝင်တဲ့ အန်အယ်ဒီ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပါတီ တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့…
IMF Nih USD Tan 350 Bak Te Kawl ram A Chuah Piak Ko Hih. Covid 19 dohnak caah Interntional IMF Press Release bord pawl nih…
House Of Democratic Pelosi Nih Trumh Impeach Tuahnak Ah Republican Party Palai 10 A Nawnnok khawh ve hna.
House ah Democratic pichur Pelosi nih President Trump impeach tuah nak ah Republican Party palai 10anawnnok khawh ve hna. Democratic state deuh in…
Thawngdik…Covid-19 khamhnak si phunkhat cuadonghnak hneksaknak an tuahmi result
By chin tawi on November 17, 2020
Trumh hi an soisel tuk ko bu ah hin, thil tuah avun i timh tak ah hin cun cakei bakasi ko. Vawlei cung…